बालबालिकालाई जंकफुड कति हानिकारक ? « Mero LifeStyle
सुमित्रा लुईंटेल	|| 28 September, 2021
खासगरी बालबालिकाहरु जंक फुड धेरै रुचाउँछन् । यस्तो खाना स्वादमा मिठो भएपनि स्वास्थ्यमा खराब असर गर्छ । खराब खानाले बालबालिकाको शारीरिकदेखि मानसिक स्वास्थ्यसम्मै असर गर्छ ।
बढी मात्रामा जंक फुड प्रयोग गर्ने बालबालिकाको शरीरमा अन्य समूहका बालबालिकाको तुलनामा अत्याधिक मात्रामा नुन, चिनी तथा मोटोपना बढाउने तत्वको मात्रा बढी हुन्छ । त्यस्ता बालबालिकाहरुमा भिटामिन ए, प्रोटिन, आइरन तथा शरीरको वृद्धि विकास गर्ने क्षमतामा कमी हुने बाल रोग विशेषज्ञ डा. प्रशान्त रिजाल बताउँछन् ।
जब हामी जंक फूड सेवन गर्न थाल्छौं, हामीलाई अघाएको अनुभव हुन्छ । पेट भरिन्छ । त्यही कारण हामी अन्य पोषिलो खानेकुरा खान सक्दैनौ । यसबाट शरीरमा पोषणको अभाव हुन्छ ।
यस्ता खानेकुराले हानी गर्छ भन्ने बुझेका मानिसलाई समेत जंक फुडको लत लाग्छ । ‘बालबालिकाहरुलाई त झन् जंक फुडको असर थाहा हुँदैन, त्यसैमाथि यसको स्वादले उनीहरू आकर्षित हुन्छन्,’ उनले भने । चाउचाउ, कुरकुरे, आलु चिप्स, लेज, कोल्डड्रिक्स, पिज्जा सबै जंक फूड हुन् । बजारमा पाइने अधिकांश तयारी खाद्य पदार्थ जंक फूड हो । जब हामी जंक फूड सेवन गर्न थाल्छौं, हामीलाई अघाएको अनुभव हुन्छ । पेट भरिन्छ । त्यही कारण हामी अन्य पोषिलो खानेकुरा खान सक्दैनौ । यसबाट शरीरमा पोषणको अभाव हुन्छ । पोषणको अभावकै कारण बालबालिकामा कुपोषणको समस्या समेत देखा पर्ने डा.रिजाल बताउँछन् ।
‘जंक फूडमा उच्च क्यालोरी हुन्छ । यसले हाम्रो शरीरको तौल अनियन्त्रित रुपमा बढ्न थाल्छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकालाई जंक फुडको साटो घरमा बनेका स्वस्थ खानेकुरा दिने बानी बसाउनु पर्छ । एक दुईपटक घरको खाना दिँदा उनीहरुले खान मानेनन् भने उनीहरुलाई जंक फुड दिनुको सट्टा माया गरेर फकाएर घरकै खाना खाने बानी लगाउनुपर्छ ।’
बालबालिकाहरुले अहिले जसरी जंकफुडको सेवन गरिरहेका हुन्छन् । या भनौ अभिभावकले बालबालिकाले झगडा गर्दा तथा सजिलोको लागि खाजामा चकलेट, बिस्कुट र चाउचाउ जस्ता जंकफुडहरु दिइहाल्छन् । यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालकी डायटिसियन डा. प्रणिती सिंह बताउँछिन् ।
बजारमा उपलब्ध खानेकुरालाई स्वादिलो र टिकाउयुक्त बनाउनका लागि कतिपय अखाद्य पदार्थ मिश्रण गरिएको हुन्छ । त्यही तत्व पेटमा नपच्ने मात्र होइन, विषाक्त पनि हुन्छ । ‘पछिल्लो पुस्तामा बढ्दो क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदिको मूल कारण नै उनीहरुको खानपान बनिरहेको छ ,’
बजारमा उपलब्ध खानेकुरालाई स्वादिलो र टिकाउयुक्त बनाउनका लागि कतिपय अखाद्य पदार्थ मिश्रण गरिएको हुन्छ । त्यही तत्व पेटमा नपच्ने मात्र होइन, विषाक्त पनि हुन्छ । ‘पछिल्लो पुस्तामा बढ्दो क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदिको मूल कारण नै उनीहरुको खानपान बनिरहेको छ ,’ उनले भनिन् ।हप्तामा एक देखि २ पटक भन्दा बढी जंक फुड बालबालिकालाई दिन नहुने उनको जोड छ । बालबालिकाको एकछिनको जिद्धिपनालाई पुरा गर्दिनको लागि उनीहरुलाई जंकफुड दिँदा शारीरीक र मानसिक स्वस्थ्यमा असर पर्ने डा.सिंहको भनाई छ । ‘बालबालिकाहरुलाई सानो उमेरमा धेरै जंक फुडहरु खान दिएर उनीहरुको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै कान्ति बालअस्पतालका वरिष्ठ बालमनोचिकित्सक डा. गुन्जन ध्वजु घरमा बनेको खानाको साटो जंक फुडको सेवन जुन रुपले बढ्दै गईरहेको छ, त्यसले बालबालिकाको शारीरीक स्वस्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र कालान्तरमा यसको प्रभाव केही मात्रामा मानसिक स्वस्थ्यमा पनि पर्ने बताउँछन् । ‘अभिभावकलाई मेरो के अनुरोध छ भने यदि बालबालिकालाई मानसिक तथा शारीरीक रुपमा स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने घरमा बनेका स्वस्थकर खानेकुरा नै खुवाउनुस्,’ उनले भने ।
वैज्ञानिक अध्ययनको निचोड : अस्पताल भर्ना भएका बच्चालाई कथा सुनाउँदा चाँडै निको हुन्छन् « Mero LifeStyle
[…] यो पनि पढ्नुहोस्हराएकामध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिकाको परिवारमा पुनर्मिलनबालबालिकाहरुलाई होमवर्क गराउँदा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्बालबालिका किन रिसाउँछन् ? कसरी गर्ने नियन्त्रण ?निषेधाज्ञामा बालबालिका : जोखिम र अवसर दुवबालबालिकालाई जंकफुड कति हानिकारक ? […]